Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / TILMAANKA Iibsiga ugu wanaagsan ee foosto
2020 / 11 / 16 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9774 0
Kudar qaab & shaqeyn qasabad jikada oo cusub. Mid ka mid ah qalabka jikada ee ugu wax ku oolka ah ayaa sidoo kale labanlaabmaya sida lahjadda ugu habboon - qasabadda jikadaada.
Haddii aad dhaqaysid cuntada, ku oroditaanka qashinka ama aad buuxinaysid dheriga si aad u karisid biyaha caadiga ah, qasabadda ayaa had iyo jeer la shidaa oo la siiyaa.
Isticmaalka soo noqnoqda awgood, waxaad ubaahantahay inaad dooratid qasabad u istaagi kara adkeynta hawl maalmeedkeeda.
Go'aaminta tuubada Jikada ugu fiican
Tixgeli waxyaabaha soo socda markaad dooraneyso iyo iibso qasabadaha internetka.:
Naqshadeynta iyo dhammee
Hal-qabsi iyo laba-qabasho
Naqshadaynta qasabadda jikada iyo Dhameystir
Tuubbooyinka jikada waxaa lagu iibsan karaa dhowr rakibid, qaabab iyo dhammayn ah. Ka soo qaado bartamaha-dejinta, hal-dalool, laba-dalool ama qaabeynta qaab-dhismeedka derbiga. Qasabadaha jikada guud ahaan waxay ku daraan saxan gogol ah ama galiyo si ay u taageeraan adeegsiga seddex ama afar god oo saxanka lagu dhaqo.
Naqshadaynta naqshaduhu waxay ka beddelaan kabaalka wanaagsan iyo iskutallaabyada looxyada iyo burooyinka, halka naqshadaha qulqulaya ay ku kala duwan yihiin qaanso dhaadheer oo leh 180 ° wareega ilaa qaanso yar oo leh buufin buufin ah. Noocyo badan oo naqshadeysan oo qulqulaya ayaa laga heli karaa qasabadaha laba-gacmeed maaddaama qulqulka uusan hor istaagin xakamaynta qaboojiyaha.
Dhamaadka qasabaddu way tiro badan yihiin waxayna ku siin karaan jikadaada dareen caan ah oo caadiyan loo sameeyay. Qaar ka mid ah dhammeystirka caanka ah waxaa ka mid ah chromium, bir bir ah, madow / naxaas ah, nikkel iyo waxyaabo kale oo badan. Xulo tuubada ay taageerto damaanad adag; inbadan oo soosaarayaasha qasabada ayaa bixiya dammaanad qaadka cimriga ee ka dhanka ah sumowga.
Astaamaha Gaarka ah: Buufiyeyaasha, Saabuunta / Qaadada looshinka iyo Nidaamyada Filtrationka Biyaha Lagu Cabbo
Buufiyeyaasha iyo saabuunta / kareemada wax lagu shubo waa astaamo caan ku ah qasabadaha jikada; buufiyeyaasha waxaa laga heli karaa inay ka soo baxaan maskaxda qasabadda ama qaab muuqaal ah oo ku xigta tuubada. Nidaamka sifeynta biyaha ee udub-dhexaadka ah waa muuqaal isbarbardhig cusub ah wuxuuna ku siin doonaa awoodda biyaha caadiga ah ee la sifeeyey qasabadda jikada.
Faa'iidooyinka qasabadaha tuurista waxaa ka mid ah gacan ku haynta socodka biyaha iyo buufinta, iyo sidoo kale dhammaan musqulaha jikada ee ay qaadi karaan. Buufiyeyaasha dhinacyadooda si shaqsi ah ayaa loo iibsan karaa waxaana lagu rakibi karaa saxanka saxeexa oo leh godad dheeri ah. Si kastaba ha noqotee helitaanka ciyaar ku habboon tuubadaada hadda jirta waxay qaadan kartaa shaqo; xitaa kuwa la yimaada qasabada waxaa mararka qaar laga sameeyaa waxyaabo ka duwan qasabada lafteeda.
Buufiyeyaasha waxaa loo isticmaali karaa in lagu maydho suxuunta, lagu dhaqo saxamada iyo in lagu nadiifiyo khudradda
Tuubooyinka buufinta si gooni gooni ah loo rakibay waxay dhaafi karaan 4 ′ oo dherer ah si loo gaadho ugu badnaan
Qalabka saabuunta / looshinka lagu dhex dhisay maahan oo kaliya inay yareeyaan qulqulatada hareerahaaga bulaacada, marka lagu daro waxay u dhigmayaan tubbadaada si ay u helaan xitaa raaxo. Si habsami leh loogu daboolay hoosta miiska kore, keydku wuxuu qaadan karaa qadar ku filan oo saabuun ama kareem ah; qaar ka mid ah qalabka wax lagu shubo waxaa ku jira masax dib loogu buuxinayo si aad ugu fududaato
Hal-qabsi Vs. Laba-gacmeed qasabada jikada
Meelaynta iyo naqshadeynta gacmaha, iyo sahlanaanta isticmaalka way ku kala duwan yihiin qasabada ilaa qasabada. Macaamillada qasabadaha laba-gacmeed ayaa isla markaaba la ag dhigi karaa tuubada qaab-dhismeed-dhex-dhexaad ah ama waxaa laga yaabaa in lagu sii fogeeyo meel ka fog qaab isku mid ah. Xakamaynta kulul iyo qabow eex la'aanta ah, waxaad si fudud ugu guuleysan kartaa hagaajinta heerkulka saxda ah.
Tubooyinka hal-ku-dheji ayaa kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh oo fudud aad ugu hagaajiso socodka biyaha iyo heerkulka hal tallaabo, adoo adeegsanaya hal dhinac. Maaddaama gacantu ay u baahan tahay shaqo yar si ay u shaqeyso, waxaa lagusoo rogi karaa curcurkaaga ama dhudhunkaaga haddii gacmuhu ay qabsadaan, wasakh yihiin ama saabuun leeyihiin.
Badhanka Hakinta (on Pullout Wand)
Qaar ka mid ah qasabadaha ayaa bixiya astaamaha badhanka oo hakad ku jira halkaas oo dhab ahaantii socodka biyaha si ku-meelgaar ah looga joojin karo usha ka bixitaanka.
Qasabadaha-buuxiyaha tuubada ayaa ku taageeraya qaabdhismeedka derbiga kala jaad ah si loogu oggolaado dheryo culus in lagu buuxiyo baaxadda halkii laga buuxin lahaa saxanka.
Hore:: Sida loo Iibsado Tuubada Jikada Cusub Next: Sida Loogu Xulo Qasabadaha Saxda ah ee Basaskaaga
2021 / 02 / 04 11998
2021 / 02 / 03 11664
2021 / 02 / 03 8085
2021 / 01 / 28 7542